မောင်ဖုန်းမြင့်: 3/1/10 - 4/1/10
မနက်ဖြန်ဟာ မနက်ဖြန်မှာ မနေထိုင်ချင်တော့ဘူးလို့ လွမ်းလွမ်းဆွေးဆွေးပြောလိုက်တယ် ။ ခင်ဗျားဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော် ဖြစ်ဖြစ် "မနက်ဖြန်အကြောင်းမပြောနဲ့ အခုချိန်ခဏလေးပျော်မလား" ဆိုတဲ့ ရော့ခ်သီချင်းတပုဒ်ဆိုခဲ့ကြဖူးလိမ့်မယ် ။
မနက်ဖြန်နဲ့မနက်ဖြန် အကြောင်းစပ်လို့ပေါင်းဘက်မိကြရင် မနက်ဖြန်လေးတွေအတွက်မနက်ဖြန် ရှိမယ်မရှိမယ် ဆိုတာ မသေချာ ဘူး။ မနက်ဖန်ဟာ ကူးစက် ရောဂါသယ်ဆောင်လာသူတဦးလို စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေတယ် ..မနက်ဖြန်ဟာဒုက္ခတွေပိုမို ထူထပ်လာတဲ့ တံခါးကိုတွန်းဖွင့်လိုက်ရင်း လေညှင်းလေးကို မျှော်တယ် . . မနက်ဖန်ဟာ မြို့ ပြအလည်ခေါင်မှာ ကွန်ပျုတာ သင်တန်းပဲ တက်ရမလိုလို . . ဘာသာစကား ပဲ သင်ရတော့မလိုလို . . . စာရင်းပဲ ကိုင်ရတော့မလိုလို .. နိုင်ငံခြားပဲ သွားတော့မှာလိုလို . . ဈေးရောင်းစားရတော့မလိုလို ဇဝေဇ၀ါနဲ့ တခုခု အမြဲလိုနေသူပေါ့ ။
မနက်ဖြန်ဟာ ပျံသန်းဘို့လဲ မတတ်နိူင်သူ အိပ်တန်းပြန်ဖို့တောင် အမှောင်နက်နက်ထဲ ကူးခတ်နေရင်း ရေနစ်နေသူပါ ။
မနက်ဖြန်ကို သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းဘို့ ဆရာလုပ်မိတော့ မင်း လက်ထဲက ဈေးဝယ်လာတဲ့ ကျွတ်ကျွတ်အိတ် ကို ငါ့ခြေရင်းမှာ မပုံခဲ့ခင် မင်းအခန်းထဲက အဲကွန်းနဲ့ ဖရက်ဂျီတာ ကို ခလုတ်ပြန်ပိတ်လိုက်ပါဦး ချာတိတ်လို့ ရယ်ရယ် ဖွဖွပြောတယ် ။ မနက်ဖြန် မှာ အရောင်းသွက်ဆုံး ကုန်စည်တွေဟာ အရက် ၊ ကွန်ဒွန် ၊ ရာသီဘွား ဟောစာတမ်း ။ ကွန်ဒွန် ၊အရက် ၊ ရာသီဘွားဟောစာတမ်း ။ ရာသီဖွား ဟောစာတမ်း ၊ အရက် ၊ ကွန်ဒုံ .. တခါတခါ မိုးဟေကို တိုးတိုးခွေ. . အဲ့ဒီလို အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပဲ နပန်းလုံးနေရတဲ့ မနက်ဖြန်ပါ ။
မနက်ဖြန် ဟာ ဆေးကုသခွင့်ခံယူဘို့ ကျန်းမာရေးအာမာခံ မရှိဘူး ။ မနက်ဖြန်ဟာ သူ့သက်တမ်း သုံးပုံ နှစ်ပုံလောက်ကို ဘစ်ကားတိုးစီးလိုက် ၊ လမ်းဖြတ်ကူးလိုက်နဲ့ ကုန်လွန်ခဲ့ခြင်းအတွ အမြဲတန်း ငြီးတွားနေ တတ်သူ။ မနက်ဖြန်သည် ပညာရည်ထူးချွန်မှု သာမန် ၊ ဉာဏ်အရည်အသွေး သာမန် ၊ ခြေလက်အင်္ဂါများ သာမန်ဖြင့် ကဗျာများကို သာမန်သာ ရေးသားခဲ့ကြောင်း ၀န်ခံပြောကြား ။ မနက်ဖြန်ရဲ့ တွေးခေါ်မှုပုံစံဟာ သုံးဘက်မြင် ရုပ်လုံးရုပ်ကြွတွေလို ဘက်စုံ မပြတ်သား မဖွံဖြိုး မတိုးတက် နေ့စဉ် စားဝတ်နေရေးထဲမှာ နစ်မြုတ်လျှက်ရှိ ။ မနက်ဖြန်သည် ရန်ကုန်မြို့ကို တတ်နိုင်သမျှ အစွမ်းကုန် ခုံခံ ကာကွယ်ခဲ့ကြောင်း တခုတ်တရပြောပြ ။
မနက်ဖြန်ကို အများက ယဉ်ကျေးမှု ခေါင်းပါး လာကြောင်း ပြစ်တင်ပြောကြားကြ ။ မနက်ဖြန်သည် လုပ်စရာ ကိုင်စရာ မယ်မယ်ရရ မရှိခြင်းကြောင့် လက်ဘက်ရည်ဆိုင်များတွင် နေကုန် နေခန်း ထိုင်လျှက် မြို့ တမြို့ကို စီရင်ချက် ချမည့်သူ များလို အိနြေ္ဒ တခွဲသား ဖြင့် ကိန်းကြီး ခန်းကြီး အင်မတန် နိုင် ။ မနက်ခင်းလင်းလိုက်တာနဲ့ ဒီနေ့အကြောင်း မစဉ်းစားခင် မနက်ဖြန်ကို စောင့်မျှော်နေကြ တာက ထုံးစံ ။ အခုဆို ခင်ဗျားရောကျွန်တော်ဟာ မနက်ဖြန်မှာ ဘာဖြစ်မယ် မသေချာသေးခင် ဒီနေ့ထဲမှာ ငေါင်စင်းစင်းတွေ ဖြစ်နေကြ ။ မနက်ဖြန်ဟာ သေဆုံးသွားတာ ကြာပြီလို့ တယောက်ယောက်က အော်ပြောလိုက် သံကြားလိုက်ရတယ်။
ကူညီပြီး လိုက်ရှာပေးကြပါဗျာ ကျွန်တော့် မနက်ဖြန်ဟာ ဘယ်ဆီမှာ ကျပျောက်သွားမှန်း . . မသိလိုက်ရခင်မှာ ဒီနေ့ဟာ ပင့်ကူမျှင်တွေ ရစ်ပတ် ဖုံးအုပ်လျှက် . . ။
Posted by phone myint at 7:23 PM2comments: Links to this post
Posted by phone myint at 8:05 PM3comments: Links to this post
အလေးမှန် ၊ ဈေးမှန် ၊ အရည်အသွေး အသင့်အတင့် အလှမွေး စကားလုံးများ ရောင်းရန်ရှိ။
ပိုက်လိုင်းက ကျလာတဲ့ ရေတွေလို ၊။
ရေတံခွန်က တောက်လျှောက် စီးသလိုမျိုး
မုသာဝါကျများ မြစ်ကြီး တခုလို စီး၍
ရိုက်ကလစ်(Right Click ) ၊ လက်ဖ် ကလစ် (Left Click ) ဘယ်ကလစ်ပဲ နှိပ်နှိပ်
ပွင့်ကျလာတဲ့ စာမျက်နှာ ပြုလုပ်ချက်များ
အများပြည်သူနှင့် စပ်ဆက် သက်ဆိုင်သော
အနက်အဓိပ္ပါယ် စံလွဲခြင်းဆိုင်ရာ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း
အိပ်မက် ၊ လေညှင်း ၊ ကောင်းကင် ၊ ဘုရားသခင် ၊ ခရမ်းရောင် ၊ ရင်ဘတ်
ဝိုင် ၊ အရက် နှင့် မူးယစ်ဆေးဝါး ဆန့်ကျင် /ငင် ရေးများ အချိုးကျ
လူထု ကိုယ်စားပြု ၊ ခေတ်လူငယ် ၊ ခေတ်လူလည်
အထွေထွေ အကျိုးဆောင် အလုပ်အကိုင် ရှာဖွေရေး အေဂျင်စီမှ
ဈေးကွက်အတွင်း ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ ဆုံးရှုံး နစ်နာခြင်း မဖြစ်စေရန်
လရောင် ရွဲနစ်နေအောင် ဆမ်းထားသော လမုန့် များ ပင်လယ် အတွင်း သို့ သွန်ချ ခြင်း ။
ကြက်ဆူပင်များ ပြုစု ပျိုးထောင်၍ မိုးလွန်ထွန်ချခြင်း ဆိုင်ရာ နည်းပညာ ဆင့်ပွား သင်တန်းများနှင့်
အရှေ့မျှော် အနောက်မျှော် ပျော်ချင်သလိုပျော် မျှော်ချင်သလိုမျှော်
မဟားဒရား မယားတယား တေးဂီတများ ထုတ်လုပ်ရောင်းချလိုက်၍
စာကြည့်တိုက် တတိုက်လုံး အသုံးချ ကြွားဝါမှု အထူးပြု ဘာသာရပ် လေ့လာလိုက်စားလိုသူများ အတွက်
အနုပညာ အမည်တပ် စားအုန်းဆီ စက်သုံးဆီ ချောဆီ အထူးအရောင်းဆိုင်များ မြို့နယ် အလိုက် ဖွင်လှစ်လိုက်ပြီး ။
အသင့်လုပ်ပြီး အသားတိုး အလှမွေးစကားလုံးများ လက်လီလက်ကား ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှု ကိုယ်စားလှယ် လုပ်လိုသူများ အမြန်ဆက်သွယ်နိုင်ပြီ ဖြစ်ပါကြောင်း . . . ။ ။
Posted by phone myint at 7:22 PM4comments: Links to this post
နည်းနည်းကြာလာတော့ အလေအလွင့်တစု ဖြစ်လာတယ်
အလေအလွင့်များ က "လေလွင့်ခြင်း လမ်းမများ" သီချင်းကိုဆိုတယ်
အလေအလွင့် တွေက လူလူ သူသူ လန်းလန်း ဆန်းဆန်း ဖြစ်အောင်လို့
လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေ ဗန်းပြ လုပ်ကြတယ်
အလေ အလွင့်များ ဆိုတော့ ကာ
လေလို တလူလူ လွင့်နေကြတာပေါ့
လူးလူး လွန့်လွန့် လွမ်းလွမ်းဆွေးဆွေးလဲ
စိတ် အမှောင်ကျနေတဲ့ အလေအလွင့်များ မသိကြရှာဘူး...
အလေအလွင့်တွေ လက်လက်ထ နေကြပြီးတော့
လေဒန်းဖန်းစီးတယ် ဆိုတဲ့ စကားဟာလဲ
လေယဉ်တင် သင်္ဘောလို အလေအလွင့်တွေ ရှိတယ်
လေချဉ် တက်နေတဲ့ လေယဉ်မောင်/မယ် လို အလေအလွင့်တွေ
လေကြီး မိုးကြီးကျနေတဲ့ လေစကြာ သမား အလေအလွင့်တွေ
လေညာက နေသာပါတယ်ဆိုတဲ့ အေးဆေးသမား အလေအလွင့်တွေ
လေညွှန်တံလို လက်ညိုး ညွှန်ရာ လေဖြစ်နေတဲ့ အလေအလွင့်တွေ
ရှိခဲ့တယ် . . . .
လေဟာနယ်ထဲမှာ ၊ လေထုထဲမှာ ၊ လေခြားမျဉ်းပေါ်မှာ အလေအလွင့်တွေ
စိုးရိမ် လေမှတ် ကိန်းညွှန်ပြ မျဉ်းက သက္ကရာဇ် ၂၀၀၀ ကျော်ထဲက
ငါရဲ့ လေလွင့်ခြင်း မင်္ဂလာ ခံယူလိုက်တဲ့ နှစ်ဟာ
ခရစ်နှစ် ၂၀၁၀ ဖြစ်တယ် . . .
အလေလွင့်များ တဲ့ လူဟာ
ခင်ဗျား ၊ ကျနော် ၊ ငါ ၊ သူတပါး ၊ ယောင်္ကျား ၊ မိန်းမ
အားလုံး ဖြစ်နိုင်ကြတာပဲ . . . ။
(သာလွန် မြန်မာ-အင်္ဂလိပ် အဘိဓန် ထဲမှ စကားလုံးများ ယူငင် သုံးစွဲ တည်ဆောက်ပါသည် )
Posted by phone myint at 1:49 PM4comments: Links to this post